Xilliga uu David de Gea u saxiixi doono heshiiska cusub kooxdiisa Manchester United oo la shaaciyay – Gool FM
(England) 17 Luulyo 2019. Warbaahinta gudaha dalka England ayaa waxay shaacisay xiliga goolhaayaha reer Spain ee David de Gea uu heshiiska cusub u saxiixi doono kooxdiisa Manchester United.
Wargeyska “The Sun” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in David de Gea uu qalinka ku duugi doono heshiiska cusub uu ku sii joogi doono Manchester United, kaddib marka ay soo dhameystaan safarkooda ay ugu diyaar garoobayaan xili ciyaareedka cusub ee 2019-2020, oo ay haatan ku joogan dalka Australia.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Manchester United ay ku guuleysatay ugu dambeyntii inay ku qanciso David de Gea saxiixida heshiiska cusub uu ku sii joogayo garoonka Old Trafford, kaddib wada hadalo leysku daalay ee u soo bilaawday tan iyo bilowgii sanadkan.
28 jirkan ayaa todobaadkii mushaar ahaan u qaadan doono aduun dhan 375 kun ginni, kaddib marka uu saxiixo qandaraaska cusub, isagoo haatan qaata £ 300,000.
Qandaraas cusub oo cusub ee David de Gea ayaa ka dhigi doono inuu noqdo goolhaayaha ugu mushaarka badan taariikhda kubada cagta, isagoo sanadkii qaadan doono 97.5 milyan euro.